Nnwom 44 NA-TWI - Ogye ho mpaebɔ - Yɛate wɔ yɛn - Bible Gateway
Nnwom 43Nnwom 45
Nnwom 44 Nkwa Asem (NA-TWI)
44 Yɛate wɔ yɛn ankasa yɛn asom, O Onyankopɔn. Yɛn nenanom aka ho asɛm akyerɛ yɛn; nneɛma akɛse a woyɛe wɔn bere so no nyinaa, wɔaka akyerɛ yɛn; saa tete mmere no: 2 sɛnea wopamoo abosonsomfo na wobɔɔ wo nkurɔfo atenase wɔ wɔn asase so no, sɛnea wotwee aman foforo aso, na womaa wo de nyaa nkɔso no. 3 Wo nkurɔfo amfa wɔn nkrante na edii asase no so. Ɛnyɛ wɔn tumi so na wɔnam dii so. Wo tumi ne w’ahoɔden, ɔka a wokae se wobɛba hɔ no na ɛdaa ɔdɔ a wodɔ wɔn no adi.